Koety: Ny Vahoaka No Mahalala Kokoa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Aogositra 2012 23:04 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, Ελληνικά, عربي, English
Naneho ny esoesony momba ny fomba amam-panao taloha be amin’ny fanomezana fahefana feno ho an’ny zokiolona, na ny Shaikh [Sheikh] ny mpiserasera Koesiana. Ho famakiana izany fomba amam-panao izany, nisioka tamin’ny alalan’ny tenifototra #الشعب_أبخص‏ [ar], midika hoe “Ny Vahoaka No Mahalala Kokoa” izy ireo.
Mpanolotra fandaharana amin’ny televiziona Koesiana iray , Ali Al Sanad nanoratra hoe:
@al_snd: Mampiseho kolontsaina marary ny filazana fa “Ny Shaikhs no mahafantatra tsara kokoa”, izay manana mpanaraka sy manana toe-tsaina manao rebik'ondry. Tsy manaiky ny maha-olom-pirenena feno izany. Efa tonga ny fotoana tokony hanoloana izany hoe “Ny vahoaka no mahalala kokoa”
Tariq Al Mutari namaly hoe:
@al_tariq2009: Eny. Mahafantatra tsara kokoa ny ao an-tranony manokana sy ny volany manokana ny Shaikhs, ary zon’izy ireo tanteraka izany no sady lojika. Saingy inona ny antony lojika amin'ny hoe Shaikhs no mahafantatra tsara kokoa amin’ny fomba fitantanana ny vola, ny fiainana sy ny hoavin'ny vahoaka?!
Omar Alessa nanampy hoe:
@omar_alessa: Nomenay 50 taona ianao nitondrana ny firenena fa tsy nahomby avokoa ireo nifandimby notohananao, ka ny ratsy lasa ratsiratsy kokoa. Taorian'izany rehetra izany, tsy nahatanteraka ny teny fampanantenanao koa ianao. Omeo anay indray ny fitantanana ny firenena satria ny vahoaka no mahalala kokoa
Nandritra izany, Talal Al Harbi nanazava hoe:
@Talal_M_1984: Efa lasa ary tsy hiverina intsony ny taonan’ny maizina… Efa afaka ankehitriny ny saina amam-panahy ka ny tanora izay te-hanoratra tantara vaovao dia te-hitondra ity firenena ity amin’ny fombany sy ny heviny satria ny vahoaka no mahalala kokoa
Saingy nizara fanehoan-kevitra hafa i Barjas Albarjas. Hoy izy:
@Barjasbh: Maro ireo mino fa vahaolana modely ny “vahoaka no mahalala kokoa” saingy tsy misy mijery fa izaho sy ianao izany vahoaka izany ary koa ny mpiasa amin’ny fitaterana an-habakabaka sy ireo izay miasa amin’ny fifindra-monina, ny biraon’ny famantarana ny toetr’andro sy ny minisiteran’ny fahasalamana – izany hoe raha fotorina ireo izay manahirana sy manala baraka antsika.
Nofehezin’i Khalid Al Rajhi hoe:
@khalid_alrajhi: Ny vahoaka no mahalala kokoa satria tena mahalala kokoa izy ireo